Qiimaha Tayada Fryers Yaryar ee ugu Fiican | 6-da ugu sarreysa ee 2022
Ma waxaad raadinaysaa shiil yar oo ku habboon cabbirka jikadaada? Waxaan kuu sheegi doonaa waxa ugu fiican ee fursadahaaga! Waanu dooranay qiimaha ugu fiican ee lacagta taasi hubaal waxay la qabsan doontaa dalabaadkaaga.
Intaa waxaa dheer, si aan kaaga caawino doorashadaada waxaan kuu sheegi doonaa waxa ay yihiin tilmaamaha ugu muhiimsan maxaase awood ah oo ay ku siinayaan diyaar ma u tahay? Aan tagno halkaas!
Isbarbardhigga Mini Fryers-ka ugu Fiican
Xirfadlaha 2 Filter Plus
Urta iyo Saliidda
Urta iyo Uurka
Waa kee Fryer yar oo la iibsanayo?
Waxaa ka mid ah xulashooyin badan oo ku badan suuqa, waxaan kuu diyaarinay xulasho leh 6 moodooyinka hadda ugu fiican noocyo kala duwan, oo ku salaysan tayada / saamiga qiimaha.
Fryer is haysta oo awood u leh 1 litir oo saliid ah iyo 600 garaam oo cunto ah, habkan ayaad u isticmaashaa saliidda lagama maarmaanka ah.
1000W koronto lagu hagaajin karo iyada oo loo marayo heerkulbeeg leh tilmaame heerkul, laga bilaabo 150ºC ilaa 190ºC
Qaab dhismeedka birta ah ee aan fiicnayn iyo gacan-qaadashada thermoplastic si fudud loogu maareeyo loona kaydiyo
Daboolka leh shaandhada daaqada iyo birta lagu daray uma baahna beddel, waxaad isticmaali kartaa daboolka markaad shiileyso
Taangiga gudaha oo leh daahan aan dhejis ahayn si loo helo natiijooyin wanaagsan oo waxtar leh
Awoodda: 1 litir
Heer kulka: 150 ° -190 ° C
Waxyaabaha lagu daro: Daboolka iyo dambiisha wax lagu shiilo
Kani waa nooc la qaadi karo oo si fudud ula qabsan kara cabbirka jikadaada. Waxay bixisaa awood ku filan oo lagu shiilo ilaa 500 ilaa 600 garaam oo cunto ah, taas oo aan ku dhejin doonin digsiga iyada oo ay ugu wacan tahay dhamaystirka aan-dhejin.
Xulashada astaantan Moulinex Waxay ku daraysaa daaqad qaybteeda sare ah taasoo kuu ogolaanaysa inaad si dhow u eegto cuntooyinkaaga shiilan, sidaas darteed hubinta habka karinta ee ugu fiican. Waxay isku daraysaa bir bir ah oo mas'uul ka noqon doonta si buuxda u daadinta cuntada, si looga fogaado dufanka badan.
Si loo dammaanad qaado natiijooyin wanaagsan bilowga hore, waxay leedahay heerkulbeeg la hagaajin karo oo dammaanad qaadi doona heerkul deggan oo xaddidan 190 ° C. Waxay leedahay qaab-dhismeed bir ah oo hubiya inay ka hortagto gubashada, iyo sidoo kale gacan-qabad fududeeya dhaqdhaqaaqa iyo maaraynta. .
Qiimaha Taurus Professional
Tilmaamahan Taurus Waxay leedahay cabbir is haysta oo ku qaadan doona meel aad u yar jikadaada, laakiin taas beddelkeeda waxay kuu oggolaanaysaa inaad shiilto qiyaastii 600g oo cunto ah. Waxa ay ku daraysaa hab sifeyn ah oo saliiddaada ku ilaalin doona nadiif isticmaal kasta ka dib, markaa kama welweli doontid isku dhafka dhadhanka ee suxuuntaada.
Shiiliyaha qoto dheer ee ugu habboon haddii aad rabto inaad si dhakhso ah u shiilso jajabyada iyo cuntooyinka fudud naftaada.
Cabbir ahaan iyo mid aad u fudud, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon qoysaska yaryar, ardayda iyo waayeelka.
Waxay kulushahay isla markiiba iyadoo ay ugu mahadcelinayso awoodda 840 W.
Sidoo kale ku habboon saliidda, jiiska, shukulaatada iyo fondue maraq leh oo leh 6 fargeeto ah.
Way fududahay in la nadiifiyo iyada oo ay ugu wacan tahay makiinada weelka lagu dhaqo qaybo ammaan ah
Awoodda: 1,2 litir
Awooda: 840 W
Heerkulbeegga: La hagaajin karo ilaa 190 ° C
Waxyaabaha lagu daro: Daboolka, dambiisha gacanta ku leh iyo 6 fargeeto fondue ah
Fryer-yar-yar Princess Ma aha oo kaliya inay leedahay cabbir is haysta si kor loogu qaado booska jikada, laakiin waxay sidoo kale bixisaa saamiga tayada / qiimaha wanaagsan. Laakiin marka lagu daro, qaabkani wuxuu ballanqaadayaa shaqo dheeraad ah: waxaa loo isticmaali karaa sida fondue koronto.
Waxay leedahay nidaam shaandhayn u xilsaaran yaraynta urta xun ee ka dhalan karta isticmaal kasta. Waad ku mahadsan tahay awoodda isku dhafan, waxay kuleyli doontaa waqti gaaban heerkulka karinta wuxuu noqon doonaa mid deggan si loo gaaro natiijada la rabo.
Awoodeeda waxay bixisaa suurtogalnimada in la shiilo ilaa 240 garaam oo cunto ah, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon lammaanaha ama qoysaska yaryar. Iyo raaxaysi weyn, waxay bixisaa nadiifin sahlan, maadaama dhammaan qaybaha ay yihiin kuwo la saari karo (marka laga reebo baaldiga) waxaana lagu dhaqi karaa mashiinka weelka.
Jata FR326E Compact Fryer
Cabbirka: Fryer-ka qoto dheer ee FR326E ayaa ku habboon jikada guri kasta sababtoo ah cabbirkiisa is haysta
Capacity: awoodda taangiga waa 1,5 litir
Kuuba: waxay leedahay dhoobo aan ulo lahayn oo ka madax banaan PFOA iyo PTFE
Jirka: 100% waa macdan. Intaa waxaa dheer, raadku kuma tagin jirkiisa.
Basket: waxa uu leeyahay gacan uu ku geliyo oo si fudud uga saaro gudaha shiilan
Heer kulka: 130 ° C-200 ° C
Daaqadda: Haa, dhalada korkeeda ayaa buuxinaysa shaqadaas
Haanta la saari karo: Maya
Waxyaabaha lagu daro: Daboolka daaqada leh iyo dambiisha gacanta ku leh.
Haddii aan raadineyno moodel cabbir kooban, ma iska indho tiri karno doorashadan uu Jata noo keeno. Waxay bixisaa awood cadaalad ah oo lagu kariyo ilaa laba jeer, taasoo ka dhigaysa doorashada ugu fiican ee qoysaska yar yar ama lammaanaha.
Nidaamkeeda karinta waxay ballan qaadaysaa inay noqoto mid degdeg ah oo wax ku ool ah, maaddaama awoodda isku dhafan ay u oggolaanayso inay ilaaliso heerkul joogto ah oo ku filan. Intaa waxaa dheer, si loo fududeeyo hawsha waxaa ku jira tilmaame iftiimin doona marka uu kulul yahay oo diyaar u ah inuu tago.
Daboolka muraayadda ayaa noo ogolaanaya inaan sawirno xaaladda cuntadeenna, sidaas darteed waxaan si dhow ula socon doonnaa cunto karinteeda. Waxay leedahay saxaarad aan dhejis ahayn oo kaliya oo aan buuxinaynin shaqadan, laakiin sidoo kale waa deegaan saaxiibtinimo leh oo gebi ahaanba xor ka ah PTFE iyo PFOA.
Cecotec CleanFry qiimaha
Fryer-dhamaadka sare leh oo leh awood 4 litir oo saliid ah, oo ku habboon karinta noocyo kala duwan oo cunto shiilan ah sida baradhada, digaaga ama kalluunka qoyska oo dhan. Waxaa ku jira shaandhada OilCleaner si ay saliiddu u nadiifiso isticmaal kasta ka dib.
Madiibaddeeda, dambiisheeda shiilan iyo filter saliidda nadiifinta ayaa ku habboon in lagu nadiifiyo makiinada weelka dhaqda waxayna leedahay 3270 W oo ah awoodda ugu badan si ay u shiilto si dhakhso leh oo hufan oo ay ku gaadho shiil qumman waqti gaaban gudaheed.
Baaldigu waxa uu ka samaysan yahay bir tayo sare leh oo adkaysi u leh taas oo ka hortagta miridhku, kordhisa cimri dhererka iyo dammaanad qaadka nadiifinta wanaagsan iyo daboolka birta waxa uu leeyahay shaandhaynta urta si looga fogaado raaxo la'aanta jikada iyo daaqada si ay si fiican u maamusho habka shiilan.
Wuxuu muujiyaa saacad 30-daqiiqo ah si uu si sahal ah u dejiyo waqtiga shiilan si loo gaaro natiijooyinka la rabo. Heerkulkeedu waa mid la hagaajin karo ilaa 190ºC si loo gaaro natiijooyinka ugu fiican oo gebi ahaanba waa laga saari karaa nadiifinta iyo dayactirka fudud.
Naqshad qurxoon oo leh birta dhammaatay iyo dambiil shiil leh oo leh taabasho qabow si loo xakameeyo habka shiilan oo looga fogaado gubashada. Tilmaamaha iftiinka iyo kala duwanaanta heerkulka iyo ilaalinta kulaylka.
Qalabyada ay ku jiraan: dambiilaha shiilan, dabool leh daaqad iyo shaandhaynta urta; filter OilCleaner.
Doorashadan in calaamaddu noo keento Cecotec Waxay leedahay nakhshad is haysta iyo awood kuu ogolaanaysa inaad shiilayso qaybo yaryar oo aad ku shiilayso suxuuntaada ugu fiican. Waxay isku daraysaa filter cusub oo loo yaqaan OilCleaner, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si fudud u soo saarto hadhaaga cuntada ee saliidda ku jirta.
Heerkulbeegga ku dhex jira waxa lagu xakameyn karaa ilaa 190 ° C, si aad u kariso cuntooyin kala duwan sida shiilan Faransiiska, hilibka, kalluunka iyo waxyaabo kale oo badan. Waxay leedahay dabool leh daaqad kuu ogolaanaysa inaad si degan u aragto habka karinta, habkan waxaad ku heli doontaa natiijada aad rabto.
Iyada oo filter ka-hortagga urta, waxay ballanqaadaysaa inay dammaanad qaadayso habka shiilan iyada oo aan lahayn ur dhib ah, markaa kama welweli doontid xanaaqyadan jikada. Haddii waxa aad rabto ay tahay xawaare, 900W oo awood ah waxaad heli doontaa; waxa u dheer in la helo cunto shiilan oo dhadhan fiican leh.
Aigostar Fries Qiimaha
【Fryer Compact】 Cabbirka is haysta oo leh awood 1000 Watts ah iyo awood 1,5 litir ah oo kuu ogolaanaysa in aad shiil ilaa 350g oo baradho ah hal mar. Cabbirkeeda 237 x 248 x 203 mm wuxuu ku habboon yahay jikooyin yaryar ama kaydin fudud.
Heerkulka la hagaajin karo】 Heerkulka gudaha wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si sax ah u hagaajiso heerkulka inta u dhaxaysa 130 ° C iyo 190 ° C, waxaad dooran kartaa heerkulka ugu habboon ee shiilan baradhada, digaaga, croquettes ama wax kasta oo aad doorbidayso.
【Aalado badbaado leh】 Gebi ahaanba balaastig BPA-la'aan ah iyo nooca 304 birta-cuntada ah, daboolka ka-hortagga faafinta si aad uga fogaato dillaacyada dhibka leh inta lagu jiro shiilan, daboolkuna wuxuu leeyahay daaqad weyn oo hufan si loola socdo cunto karinta.
Sifooyin dheeri ah】 Dambiil shiilan oo bir ah oo leh gacan qabow oo taabasho ah, laga saari karo oo ku habboon in lagu nadiifiyo makiinada weelka dhaqda, iftiinka tijaabada si uu u muujiyo koronto iyo in saliiddu ay gaartay heer kulka ugu wanaagsan.
Guaran Dammaanad -qaadyada Tayada】 Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid alaabtayada, mar walba waad nala soo xiriiri kartaa annaguna waan ku farxi doonaa inaan ku caawino.
Waxyaabaha lagu daro: Dambiil shiil.
Haddii aad boos yar ku leedahay jikada, nooca Aigostar ayaa noloshaada kuu fududayn doona. Waxay isku daraysaa awoodda 1,5 litir, taas oo ay ku mahadsan tahay taas oo aad ku kari karto qiyaastii 350 garaam oo cunto ah; ku filan laba jeer ama hal adeeg.
Waxaa ku jira dambiilaha aan dhegta lahayn, la rari karo, si fudud loo nadiifin karo oo leh gacan qabow ku dhex dhisan si ay ugu habboonaato. Heerkulka heerkulkeedu wuxuu bixiyaa suurtogalnimada in si habboon loo kariyo nooc kasta oo cunto ah; laga bilaabo shiilan faransiis, steaks, digaag, kalluunka iyo qaar kaloo badan.
Awooddeeda 900W waxay dammaanad qaadaysaa habka shiilan ee degdega ah, maadaama ay u oggolaanayso saliidda inay ku kululaato waqti gaaban waxayna ka caawisaa inay ku hayso heerkul deggan cunto karinta isku mid ah. Waxa kale oo ay isku xidhaa tusaha heerkulka, kaas oo masuul ka noqon doona wargelinta marka shiilanuhu diyaar u yahay inuu bilaabo.
Fryers Yaryar Iibinta Ugu Wanaagsan
Jata FR326E Fryer...
FRYERKA Korontada 1L...
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » In yar